खबपु भन्छन्, ‘कमेडी च्याम्पियन जातले हैन प्रतिभाले जित्छ ! रोल्पेली जनजाती भन्दा मन दु:ख्छ – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/खबपु भन्छन्, ‘कमेडी च्याम्पियन जातले हैन प्रतिभाले जित्छ ! रोल्पेली जनजाती भन्दा मन दु:ख्छ
नेपालको पहिलो रियालिटी सो कमेडी च्याम्पियनको फाइनलमा पुगेका रोल्पाली खड्ग बहादर पुन ‘खबपु’ भोट माग्नमा व्यस्त छन् । कमेडी च्याम्पियनको उपाधी चुम्ने होडबाजीमा प्रतिस्पर्धिहरुले प्रचारप्रसारलाई तिव्र गतिमा बढाएको छ । फाइनल भोटिङ सुरु भइसकेको छ, नेपालबाट इ-सेवा र नेपाल बाहिरबाट कमेडी च्याम्पियनको एप प्रयोग गरि मनपर्ने कमेडियनलाई चैत १ गते दिउँसो १२ बजे सम्म भोट गर्न सकिनेछ ।
कमेडी च्याम्पियनको टप २० बाट बाहिरिएका रोल्पाली कमेडियन खबपु चंचल सर्वाधिक भोट पाएर पुन वाइल्ड कार्ड मार्फत कमेडी च्याम्पियनमा फर्किएर उनी फाइनलमा पुगेका हुन् । अर्गानिक कमेडियनको ट्याग पाएका खबपु यतिबेला भोट अपिल गर्दै प्रचार प्रसारमा लागेका छन् ।